ထက်အောင်ကျော်| February 18, 2013 | Hits:6,938
| | နော်ဝေရောက် မြန်မာများနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံပွဲ (ဓာတ်ပုံ – အောင်ဆန်းညွန့်)
အခွန်လွတ် နော်ဝေ ဟောလီးဒေးနှင့် ဆက်ကြေးကောက် မြန်မာပြည်ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး KNU နှင့် ၈၈ ပူးပေါင်းမည်၈၈ နဲ့ NLD ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးခရီး၈၈ မျိုးဆက် အဖွဲ့ NLD မှတဆင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ဖွယ်ရှိနော်ဝေ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အမြင်
Swe htwe February 18, 2013 - 11:53 pm Welcome our brothers !!!
Reply ml February 19, 2013 - 3:32 am ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်တို့ အခုလက်ရှိ တရုပ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး အောင်မြင်၊ နိုင်ငံတိုးတက်မှုဟာ တနိုင်ငံလုံး သန်းနဲ့ ချီလူထုအားလုံး တော်နေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ လူတစု (ရာဂဏန်းလောက်) တော်ရင်၊ အတွေးအခေါ်ကောင်း၊ အမျှော်အမြင်ရှိရင် ရပါပြီ။ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ အားလုံး မဟုတ်တောင် အများစု ပြန်လာဘို့ မလိုပါဘူး။ ကိုထက်အောင်ကျော် ပြောသလို အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အချို့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ကျောင်းပြီးအောင် တက်ခွင့်မရတော့ပဲ ရရာ အလုပ် လုပ်နေရသူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ လုပ်နေတာတွေ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်တတ်သူ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ထူထောင်မှုမှာ တကယ်ပါနိုင်မယ့် သူတွေကို မေးမြန်း၊ လက်ကမ်း၊ အပြီး ပြန်မလာနိုင်သေးတောင် ခေတ္တ လပိုင်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဥပမာ Vacation ခရီးကို တခြားမသွားပဲ မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး သင်တန်းလေးတွေ ပေးတာ၊ အကြံပေး လုပ်တာမျိုးနဲ့ ပြည်တွင်းက ပညာရှင်တွေနဲ့ လက်တွဲ သင်ပြ အကျိုးပြုဘို့ ကမ်းလှမ်းသင့်ပါတယ်။ ဟိုတလောက အမေရိကားက ပြန်သွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဆိုတဲ့ ၁၀ယောက်အုပ်စုတောင် သူတို့ လိုတာ မရလို့လား၊ အသုံးမတဲ့လို့ ပြည်တွင်းက လက်မခံလို့လား၊ ပြန်လာကြတယ် မဟုတ်လား။ ဗဟု အဖွဲ့ကလူတွေကျတော့ လစာကောင်းနဲ့ နေရာကောင်းတွေရတော့ ပြည်တွင်းမှာပဲ လုပ်စားကြပြီလေ။ သူတို့ တောင်းသလို တလ လစာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တသောင်း ပေးဘို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးပညာရေး ထောက်ထားဘို့ ပြောကြတာ ကိုယ်ချင်းစာကြပါ။ အစိုးရမကောင်းလို့ ကိုယ် ဘ၀ ပျက်ခဲ့ရပေမယ့် ကိုယ့်အလှဲ့မှာ သားသမီးအပေါ် မိဘ၀တ္တရားကျေပြွန်ချင်သူတွေ အပြစ်မမြင်စေချင်ပါဘူး။
Reply ml February 19, 2013 - 3:35 am “အဝေးရောက်ရဲဘော်တွေဆီက သူလိုချင်တဲ့အကူညီဟာ ငွေကြေးလှူဒါန်းတာ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ပညာအရ ထောက်ပံ့ကူညီတာဖြစ်တယ်။” လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသွားတာ ကြားရလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကျွန်မတို့ ပညာမတတ်လို့ ပညာနဲ့ ပြန်မကူနိုင်၊ သားသမီးတွေ ငဲ့ရလို့ လူကိုယ်တိုင် မပြန်နိုင်ပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်လေး ချွေးနည်းစာထဲက ဖဲ့ ပေးတာပါ။ တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလို အန်ဂျီအိုတွေ၊ ပြည်ပအလှုရှင်တွေဆီက ရငွေကို တဆင့်လက်ခံ၊ ကိုယ့် နေထိုင်စားစရိတ်ဖယ်ပြီး ပိုတာကို ပေးသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ မစ္စတာဆိုလာ့ဇ်ဆီက တနင့်တပိုးရထားပြီးတော့ ကျွန်မတို့ မစားရက် မသောက်ရက် ဖဲ့လှုတဲ့ တကျပ်တပြား တန်ဘိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ ကိုမင်းကိုနိုင်။
Reply kyaw tun February 19, 2013 - 8:18 am I like ko min ko naing words”2015 is notagoal …justapost … if nld win junta will give the power to nld .. in 1990 nld beats junta but nld goes to jail ..” He isatrue leader …. long live ko min ko naing …..
Reply K Z Y Htun February 19, 2013 - 7:04 pm A good reminder from MKN to all of those who are living abroad and have the potentials for the country.
Reply Sunshine February 20, 2013 - 9:30 am Believe it or not, USDP will steal and cheat the polls(votes) in 2015. They will not step down easily. NLD won the last bypass election. USDP and Thein Sein knew that these NLD seats would not affect their rule. Rather, they could be used as scapegoat. But in 2015, things will be different. If the NLD can challenge USDP, the current regime will use their dirty tactics to hold on to power. As long as international observers are allowed to be at every polling station, cheat and lie will happen to keep power in their dirty hands. I predict that dirty game is ahead of us.